Kooxda Chelsea oo guul muhiim ah kaga gaartay Southampton kulankooda siddeedaad ay ka ciyaareen xili ciyaareedkan Premier League – Gool FM
Kooxda Chelsea oo guul muhiim ah kaga gaartay Southampton kulankooda siddeedaad ay ka ciyaareen xili ciyaareedkan Premier League
(Premier League) 07 Okt 2018. Kooxda Chelsea ayaa guul muhiim ah ee 3-0 kala soo laabtay St Mary’s Stadium guul muhiim ah, kulankooda 8-aad ay xili ciyaareedkan ka ciyaareen horyaalka Premier League.
Kooxaha Southampton iyo Chelsea ayaa kulankan ku bilaawday si xiiso badan, inkastoo ay Blues dooneesay in ay guul gaarto kulankooda 8-aad ee horyaalka Premier League.
Chelsea ayaa kulankan ku booqatay kooxda Southampton garoonkeeda St Mary’s Stadium, waxaana goolasha kulankan kooxda Blues kaga mahdineysaa Eden Hazard, Ross Barkley iyo Alvaro Morata.
Daqiiqadii 30-aad ee qeybta hore ciyaarta Chelsea ayaa la timid goolka daah furka ciyaarta waxaana waxaana u dhaliyay xidiga reer Belgiam ee Eden Hazard, kaasoo caawin ka helay saaxiibkiis Ross Barkley, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hogaamineesay kooxda martida ahayd ee Chelsea, balse marka dib leysigu soo laabtay qeybta labaad ayay labada kooxood sameeyeen isku dayo weerar iyo weerar celis ah.
Qaybtii labaad kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London ee Chelsea ayaa heshay goolkeeda 2-aad ee ciyaarta, waxaana daqiiqadii 57-aad 2-0 ciyaarta ka dhigay Ross Barkley oo caawin ka helay saaxiibkiis Olivier Giroud.
Ku dhawaad dhamaadka ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 90-aad Alvaro Morata ayaa dhaliyay goolka 3-aad ee kooxda Chelsea iyo sidoo kale ciyaarta, kadib markii uu caawin qurux badan ka helay Eden Hazard wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-0.
Ugu dambeyn kooxda martida ahayd ee Chelsea ayaa kala soo laabatay garoonkeeda St Mary’s Stadium guul muhiim, waxayna markale ka fogaadeen in ay la kulmaan guuldaradooda ugu horeesay ee xili ciyaareedkan.
Messi iyo Rakitic oo Labo Abaal marin ka helay Hal Kulan....(Waa maxay?)
Maurizio Sarri oo rikoodh muhiim ah kaga soo barbareeyay Jose Mourinho horyaalka Premier League